Isimo sezulu esibi kakhulu sixhumene nokushisa komhlaba | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Njalo lapho kwenzeka isimo sezulu esibi, kungaba ukushisa, isiphepho noma isiphepho, Eminyakeni yamuva sizibuze okuningi uma ngabe kuhlobene nokushisa komhlaba noma cha lokho kuyenzeka emhlabeni.
Belangazelela ukunikeza impendulo ecacile yesayensi, iqembu eliholwa nguNowa Diffenbaugh, umcwaningi eStanford University's School of Earth, Energy and Environmental Sciences, kuhlanganiswe izibalo zokuhlaziywa kwesimo sezulu namamodeli akhiqizwe ngekhompyutha ukutadisha umthelela wokufudumala kwembulunga yonke kumicimbi yesimo sezulu esibi ngokweqile.
Ngenkathi ososayensi esikhathini esedlule bebegwema ukuxhumanisa imicimbi yesimo sezulu ngasinye nokufudumala kwembulunga yonke, ngoba bekunzima kubo ukwehlukanisa ithonya isintu elinalo ekuguquguqukeni kwesimo sezulu semvelo, namuhla ngenxa yentuthuko yesayensi uDiffenbaugh nethimba lakhe abakwazile ukunikeza impendulo yombuzo obuzwe kaningi: Ingabe izehlakalo zesimo sezulu esibi kakhulu zibangelwa ukufudumala kwembulunga yonke?
Ngokwesifundo esishicilelwe ephephabhukwini i-Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), impendulo icacile: Yebo, futhi ngokuvama okwandayo, njengoba izinga lokushisa lomhlaba jikelele landa, kwenzeka izehlakalo ezimbi kakhulu ezibeka izimpilo zabantu engcupheni.
Eqinisweni, amathuba emicimbi efudumele akhuphuke ngaphezu kwama-80% womhlaba lapho okubonwe khona bekutholakala. Ngakolunye uhlangothi, emicimbini eyomile neyomileyo, ababhali bathola ukuthi ithonya lomuntu likhuphule izingqinamba cishe ngengxenye yendawo lapho kutholakala ukubonwa okuthembekile khona.
Lolu cwaningo olusha luzosivumela ukuthi sibe nombono oqondile wokuthi abantu bakuthinta kanjani ukulingana kwemvelo yemvelo yomhlaba.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Isimo sezulu esibi kakhulu sixhumene nokushisa komhlaba